Ịtali na -amụba ndepụta nke ihe ndị chọrọ ịgafe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Ịtali na -amụba ndepụta nke ihe ndị chọrọ ịgafe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • omenala • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ịtali na -amụba ihe ndepụta na -achọ ngafe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Green Pass ga-abụrịrị iwu maka ndị nkuzi, ụmụ akwụkwọ mahadum na ndị mmadụ na-eji ụgbọ njem ọha dị anya site na Septemba 1.
Green Pass nke Italy bụ akwụkwọ dijitalụ ma ọ bụ akwụkwọ na -egosi ma ọ bụrụ na mmadụ enwetala opekata mpe otu ọgwụ COVID, nwalere ihe ọjọọ, ma ọ bụ gbakee na nje ahụ.
NJ ahụ dị mkpa maka ọtụtụ ebe azụmahịa na ebe ọdịnala na August 6.
Azụmaahịa na -eleghara ịmanye iwu ahụ nwere ike bute ntaramahụhụ maka ma ndị ahịa ma ebe egwuregwu sitere na € 400 ruo € 1,000.
Ndị ọrụ Italiantali kwupụtara na gọọmentị mba ahụ amụbaala ndepụta nke ihe omume a ga-achọ ugbu a ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ma ọ bụ ọnọdụ coronavirus na-adịghị mma.
Dị ka ọkwa taa, Green Pass nke Italy ga-abụrịrị iwu maka ndị nkuzi, ụmụ akwụkwọ mahadum, na ndị mmadụ na-eji ụgbọ njem ọha dị anya site na Septemba 1.
Onye minista ahụike Italy Roberto Speranza kwuru na e mere mkpebi ịgbasawanye iwu itinye n'ọrụ n'ụlọ akwụkwọ na ụgbọ njem ọha iji "zere mmechi na ichekwa nnwere onwe."
Green Pass bụ akwụkwọ dijitalụ ma ọ bụ akwụkwọ na-egosi ma ọ bụrụ na mmadụ anatala opekata mpe otu ọgwụ mgbochi COVID-19, nwalere ihe na-adịghị mma, ma ọ bụ gbakee n'ọrịa coronavirus, ọ dịkwa ka akwụkwọ ahụike ahụ nke France wepụtara n'oge na-adịbeghị anya. .
Green Pass ghọrọ ihe dị mkpa maka ọtụtụ ebe azụmaahịa na ebe ọdịnala Italiantali, gụnyere ebe ngosi ihe mgbe ochie, ámá egwuregwu, sinima, mgbatị ahụ na ebe oche ime ụlọ n'ụlọ mmanya na ụlọ nri, na Ọgọst 6.
Enweghị ike ịmanye iwu ọhụrụ nwere ike bute ntaramahụhụ maka ma ndị ahịa ma ebe egwuregwu sitere na € 400 ruo € 1,000 ($ 470 ruo $ 1,180). Ụlọ ọrụ ndị na -emebi ihe inye onyinye ugboro ugboro ka ndị ọchịchị mechie ruo ụbọchị iri.
Prime Minista Italy Mario Draghi emeela ihe ike iji bulie ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na ọsọ ya na obodo ya. N'ọnwa Mach, praịm minista nyere iwu ka a mee ka ọ bụrụ iwu maka ndị ọrụ ahụike niile. Gọọmentị agbaala akwụkwọ ikike ahụike ka ọ bụrụ ụzọ iji kwalite ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi.
Italytali debara aha ọnwụ 27 metụtara coronavirus na Tọzdee, ma e jiri ya tụnyere ụbọchị 21 gara aga, Ministri Ahụike nke mba ahụ kọrọ, ebe ọnụ ọgụgụ ndị ikpe ọhụrụ ruru 7,230 site na 6,596. Andtali na ọtụtụ mba ndị ọzọ arụtụla aka na ụdị Delta a na -ebufefe ọzọ iji gosi na ọ bụ usoro nchịkwa ọhụrụ na -ese okwu.